Rashiid Sheekh Cabdillaahi Xaaji Axmed
Adduun iyo taladii
ISBN: 88-88934-16-2 -
Curisyo 4: Rashiid Sheekh Cabdillaahi Xaaji Axmed oo loo yaqaanno Rashiid Gadhwayne wuxuu innoogu deeqay ururinta maqaallo xilliyo kala duwan soo baxay oo uu ku cabbirayo fikirkiisa arrimo badan oo kala duwan.
London: Sunday, 12 September 2010 at 4pm at West London Islamic Centre & Jamia Masjid,
Brownlow Road, West Ealing, W13 0SQ, London.
Sheffield: Sunday, 19 September 2010 at 2pm at Sorby House, 42 Spital Hill, Sheffield, S4 7LG
London: Saturday 30th October 2-6pm, Oxford House In Bethnal Green
Rashid Gadhwayne waa xeeldheere cilmiga bulshada, cilmibaadhe iyo qoraa si gaar ah u ururiya, una xafida oo faaqida, suugaanta afsoomaaliga. Wuxuu hadda deggan yahay carriga ingiriiska.
Akhriste - 2013-08-09 03:05:19
Maxamuud - mij_elmi@hotmail.com
Ma aan helin weli buuggan, waxaanse akhriyey maqaaallo qoraagu kusoo daabacay mareegaha Af-Somaliga qaarkood, oo aan filayo in buuggan lagasooo garroocay, hadii aan lagasoo garroocina isku mawduuc bay ka hadlayaan isku maskax bayna kasoo wada burqadeen. Markaa waa buug qaayo leh, Rashiidna waad ila garanaysaan. Markaa waxaan dhiiri gelinayaa in la iibsado oo la akhriyo. Waa buug aan dhigiisa Af Soomaali lagu hayn. Ilaahay haka abaal mariyo Rashiid.
Akhriste - 2011-03-02 07:57:55
Mahad illaahii ina abuuray ayaa iska leh, intaa kadib waxaan salaan qaaliya oo qiimo badan u dirayaa qoraaga soomaaliyeed ee Rashiid Sheekh Cabdilaahi, waxaanan leeyahay Rashiid u noqo umada hormood, ha daalin, hanaanka wanaagsan ee aad u heelantahayna waa mid umada wax u qabanaya sidaa daraadeed ku soco. "dhaxalkii la beeraa dhib lagu iloobaa." Akhriste aad u jecel dhaqankiisa, iyo hidaha soomaalida ,si muglena doondoon ugu jira,suugaanta soomaalida iyo dhaqankeedaba inta ilaa hada hoga madow ku jirta. OGOW qofyahow soomali "hadii aad tahay , soomaali maxaad ku cadaynaysaa soomaalininimadaada" haba doondoonine waa dhaqankaaga , u fiirso imika aaway dhaqankii aan hidaha u lahayn waa gabaabsi , soo noolee si aad soomaali dhaba u noqoto,hadii kale su'aashan aan ku waydiiyay uma haysid jawaab , soomaalina ma tihid ee ogow. sidaa daraadeed waa in la garab istaagaa Rashid oo qof walba dhankiisa ka baadhaa sida Rashiid ugu heelan yahay soo ururinta suugaanta ummada Soomaaliyeed. hadii sidaa lagu sii jiro mudo waxa la is waydiindoonaa cida aynu nahay soomaalinimadeenuna waxa ay gali doontaa shaki. mar labaad waxa mahad iska leh, qoraaga iyo bahda Redsea-online.
Akhriste - 2010-12-27 02:39:48
Zaki ali osman - Cadnaan_0009@live.com
War waxaanu idinka codsanayna haddanu nahay dad wadan ka jogay inad noos galisaan web wixii buugaga ayago ku qoran webkan lacag la'aana ah
Akhriste - 2010-09-14 07:12:08
Abdulqaadir Ali - kadir23@hotmail.com
Captivating commentary on the situation of the Somali speaking people and their land. Very clear and well developed arguments on the deep rooted effect of "qabyaalad " on the Somali mentality and world views. Waxa si gaar ah garasho iigaga korodhay qadiyada umadaha hoos lii dhigo ee ku dhex nool Soomaalida kale iyo sida ay arrintani ugu xidhantahay guud ahaan qabyaalada iyo ku dhaqankeeda ku waajihan isahaanshaha qofka (identity ).